Bezimasha eThekwini izolo izitabane zilwela amalungelo azo | News24
Bezimasha eThekwini izolo izitabane zilwela amalungelo azo
Aluta Mbele, ILANGA
Durban - "Noma bangasibulala kodwa ngeke basiqede. Nathi singabantwana bakaJehova," lawa ngamazwi abeshiwo yizitabane ezimashe zagcwala izitaladi enkabani yeTheku ngoMgqibelo, zilwela amalungelo azo.
Zikhala ngokubulawa nangokuhlukunyezwa emphakathini noma ngokuphathwa ngendlela engamukelekile.
Le mashi eba minyaka yonke ebizwa ngokuthi yiDurban Gay Pride okungeyesithathu yenzeka iqale eGugu Dlamini Park, eWorkshop. Nonyaka bekumashwa ngaphansi kwesiqubulo esithi: "Hands Off My Body! Hands Off My Right."
Kulokhu inhloso yale mashi bekuwukukhumbula labo ababulawa emphakathini ngenxa yokuthi bayizitabane kanye nababulawa yingculaza.
Abebeyingxenye yale mashi bathi bafuna uhulumeni abavikela, ikakhulukazi abantu besifazane kanye nezingane.
OLUNYE UDABA:Inhlangano yezitabane iziklomelisa uMalusi Gigaba
Omunye wabahleli bale mashi uNkz Nonhlanhla Mkhize unxuse uhulumeni ukuba ungenelele ekubulaweni kwezitabane. Uthi ukuba yisitabane akusona isifo kodwa yindlela abadalwe ngayo wumdali.
"Abantu abaningi basaba ngisho ukuphumela obala ngoba besaba ukubulawa emiphakathini esiphila kuyo. Sinxusa uhulumeni ukuba asivikele, sekwanele manje. Lokhu kubulawa kuzogcina sekuphenduka imfashini emphakathi uma singakunqandi. Sicela abantu basihloniphe kakhulu baphinde basivikele ngoba singabantu sonke," kusho uNkk Mkhize.
Bafuna ukuvikeleka kakhulu ezikoleni nasezindaweni abasebenza kuzo. Bathi futhi bazoyilwa impi yokucwaswa kwezingane ezikoleni ngenxa yobulili bazo.
UMpho Sengane (27) noNomagugu Moloi (22) okungamantomabazane ayizithandanai, abesuka eSoweto, eGoli, asebethandane iminyaka emine bathe bayakujabulele kakhulu ukuba yingxenye yalo mcimbi, futhi bathi awubaphuthi lapha eThekwini.
Bebekhuluma baze babambane ngezandla, baqabulane bekhombisa uthando lwabo. Abakufihli ukuthi bafuna ukushada kodwa uma sebevumelene nemindeni yabo.
Kukhanyiswe ikhandlela ngenhloso yokukhumbula labo ababulawa ngesihluku ngenxa yokuphila impilo yobutabane, futhi kukhunjulwa asebashona bebulawa yingculaza.